ဖုန်းကိုင်လွယ်လာလေလေ ဂိမ်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ ကလေးတွေနဲ့လည်း မကင်းကွာနိုင်လေလေဖြစ်လာပါတယ်.။ အဲဒီ့အတွက် အခြားသော လူကြီးဆော့တဲ့ဂိမ်းတွေထက် ကလေးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မယ့်ဂိမ်းမျိုးကိုသာ ကလေးအတွက်သီးသန့်ပေးဆော့သင့်ပါတယ်။ ကလေးဆော့တဲ့ဂိမ်းဖြစ်ရင်ပြီး‌ရော....ရော့...အင့်...ဆော့.....ဆိုပြီးလည်း ကလေးကိုချည်း မျက်လုံးမှိတ် ဖုန်းထိုးပေးထားလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ မိဘကအမြဲ သားသမီးကို တစေ့တစောင်း အကဲခတ်ပြီး စည်းကမ်းနဲ့သတ်မှတ်ပေးမှဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် လူကြီးဆော့တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေဟာ ကလေးတွေနဲ့ လုံးဝမကိုက်ညီနိုင်ပါဘူး။ ကလေးကိုလည်း အထောက်အကူမပြုသည့်အပြင် သွေးထွက်သံယိုသတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ဂိမ်းမျိုးဆိုပိုပြီး ဆိုးပါတယ်။ အဒါကြောင့် မိဘလုပ်က သားသမီးကို ထိုကဲ့သို့ လူကြီး‌ေဆာ့တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားမျိုးလုံးဝပေးမဆော့မိဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်ကလေးဟာ အဲဒီလိုဂိမ်းမျိုးဆော့နေတယ်ဆိုရင်လည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်ကို လျှော့လျှော့သွားပြီး တခြား ကလေးအသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစား(education game) လေးတွေနဲ့အစားထိုးပေးပါ။ အောက်ကဖော်ပြထားတြ့အချက်လေးတွေနဲ့ ကလေးက ဂိမ်းဆော့နေပေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ဂိမ်းဆော့ခြင်းဖြစ်အောင် ပြုပြင်ယူပေးပါ။ သတိထားရမှာတော့ အကျိုးရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုပေမယ့် တစ်နေ့လုံးဂိမ်းကိုသာ စွဲစွဲလမ်းလမ်းဆော့နေတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်။ ဆိုးကျိုးကတော့ အနည်းနဲ့အများရှိတာချည်းပါပဲ။
၁) အသက်အလိုက် Education Game Application တွေဖုန်းထဲထည့်ထားပေးပါ။
ကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ Application game လေးတွေ ရှာပြီးဖုန်းထဲထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ ကလေးရဲံ အဂ်လိပ်ဝေါဟာရကြွယ်ဝဖို့၊ အသံထွက်မှန်ကန်ဖို့၊ သချာ္စွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စတဲ့အမျိုးမျိုးသော အထောက်အကူပြုတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေကို အသက်အလိုက်ရှာပြီး ဖုန်းထဲထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကို ကလေးလက်ထဲ အချိန်ပြည့်ပေးထားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်။
၂) သတိတရ ပြန်မေးပေးပါ။
ပညာရေးအထောက်အကူပြုဂိမ်းဆော့နေတာပြဆိုပြီး ပစ်ထားလို့လည်းမရပြန်ပါဘူး။ ဘယ်အကောင်လေးကို ဘယ်လိုခေါ်တာလဲ.....? ဘယ်စာလုံးပေါင်းကို ပေါင်းပြပါအုံး? ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းရင် ဘာရသလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့ မိဘက ဆော့နေတာကိုထိုင်ကြည့်ပေးပြီး ပြန်မေးပေဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဂိမ်းဆော့ချိန် တစ်နာရီသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာလည်း တခြားနည်းလမ်းနဲ့ဆော့ရင်းကစားရင်း မနက်က ဂိမ်းထဲမှာ ဘာအသစ်တွေထပ်ဆော့ရသလဲ? ဘာစာလုံးအသစ်တွေသိရသေးလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးနဲ့ကလေးကို ပြန်မေးပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးကိုချည်း ငြိမ်ရင်ပြိးရော.....ဆိုပြီး ဖုန်းတစ်လုံးထိုးပေးပြီး ပစ်ထားတာမျိုးက လုံးဝမှားယွင်းပါတယ်နော်။ ကလေးဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာလည်း မိဘက တစေ့တစောင်းအကဲခတ်ရမှာပါ. အဲဒါမှ အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတာ သတိပေးပြီးဖုန်းသိမ်းတာမျိုး၊ ဖုန်းထဲက ကလေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို ကြည့်ခွင့်မပေးတာမျိုး ၊ ကလေးဆော့နေတဲ့ဂိမ်းကို ကလေးနဲ့အတူ ကူဆော့ပေးတာ၊ ကူစဥ်းစားပေးတာမျိုး၊ စာလုံးပေါင်းအသစ်တွေကို ကလေးနဲ့အတူ မှတ်သားဖို့ ရွတ်ဖတ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ. ။
၄) ဆော့ရင်းနဲ့ စာသင်ပေးပါ။ အချိန်တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးပါ။
အဲဒါမှ ကလေးနဲ့အတူဆော့ကစား၇င်း ကလေးကလည်း စာလုံးအသစ်တွေ၊ အသံထွက်အသစ်တွေရလာမှာဖြစ်သလို မဆော့ခင်ကတည်းက ဘယ်အချိန်မှာတော့ ဂိမ်းပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မပြီးသည်ဖြစ်စေ နားကိုနားရမည်ဆိုတာမျိုး တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှအချိန်ကိုလည်း လေးစားတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မရောက်ခင်မှာလည်း မိဘလုပ်သူက အချိန်ကိုအတိအကျ ရပ်နားဖို့ပြောရပါမယ်။ ရပ်နားသင့်တဲ့အချိန်မရပ်နားရင် နောက်တစ်ချိန်ဆာ့မယ့်အချိန်ထဲက ပြန်နုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး သတိပေးရပါမယ်။ တိတိကျကျ အပြစ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒါမှ အချိန်မခိုးရဲမှာြဖစ်ပါတယ်။
၅) စာမေးသမျှရမှသာ တခြားGame ဆော့ချိန်ပေးပါ။
Education Game လေးတွေအပြင် တခြား ဂိမ်းအမျိုးအစားမျိုးဆော့ချင်တယ်....ဆိုလျှင်လည်း စာအရင်ရအောင် အချိန်သတ်မှတ်ပြီးစာလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ စာကိုသေချာအာရုံစိုက်ပြီး သေချာ ရတယ်ဆိုတာ မိဘကို သက်သေပြခိုင်းပြီးမှသာ တခြားဂိမ်းဆော့ဖို့ ခွင့်ပြုပါ။ အထက်ကအတိုင်း အချိန်အတိအကျ မိဘကသတ်မှတ်ပေးပါ။ မလိုက်နာရင် နောက်တစ်ချိန်မဆော့ခိုင်းမည့်အကြောင်း သေချာပြောပါ။ တကယ်လည်း အပြစ်ပေးပါ။ အချိန် မိနစ်ပိုင်းလေးကအစ သေချာတိတိကျကျ မှတ်ထားပါ။
၆) တခြား:Game ဆော့ချိန်ကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပါ။
Education Game နဲ့ တခြားသော ဂိမ်းတွေက မတူညီတဲ့အတွက် တခြားသော ဂိမ်းဆော့ချိန်ကို လုံးဝလုံးဝ အချိန်ခိုးပေးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ မိဘက အချိန်ကိုသေချာမမှတ်သားဘဲ ပေါ့လျော့ပေးလိုက်ခြင်းက ကလေးကို ဂိမ်းကို စွဲလမ်းသွားစေပြီး နောက်နေ့တွေမှာလည်း မိဘမသိအောင် အချိန်ခိုးဆော့လို့ရတယ်လို့ အထင်‌ရောက်စေပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ကလေးတွေကို အရွယ်မတိုင်မီ မိဘက ဖုန်းပေးကိုင်တာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဝယ်ပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဖုန်းကိုင်တတ်အောင်တော့ ပေးသုံးသင့်တယ်ဆိုရင်တောင် အချိန်အတိအကျဖြင့် သေချာသတ်မှတ်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်ရင် ပြန်သိမ်းတာမျိုးနဲ့ ဖုန်းကို မိဘသာသိတဲ့ ပတ်စဝေါ့ခံထားတာမျိုးတွေလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှာမဆို ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောင်းကျိုးများများရပြီး ဆိုးကျိုးနည်းပါးဖို့ကို ဥာဏ်နဲ့ယှဥ်သုံးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် အမှန်အမှာခွဲခြားနိုင်စွမ်းအားနည်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်အရွယ်တွေကို မိဘက စည်းကမ်းတကျသာ အကျိုးရှိရုံပေးသုံးသင့်ပါတယ်။ စွဲလမ်းခြင်းနဲ့အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်မလာဖို့ မိဘက သေချာControl လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။